जब माधव नेपाल र झक्कु सुवेदी एउटै मंचमा देखिए.... - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
जब माधव नेपाल र झक्कु सुवेदी एउटै मंचमा देखिए….
काठमाडौं । संविधानसभको पहिलो निर्वाचन अघि झक्कु सुवेदीलाई थोरैले मात्र चिन्थे। उनको चर्चा समेत कतै हुदैनथ्यो। तर संविधान सभको पहिलो निर्वाचन पछि उनी देश विदेशमा समेत चर्चाको शिखरमा पुगे। यसको मुख्य कारण थियो एमालेका तत्कालिन महासचिव समेत रहेका माधव नेपाललाई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा हराउनु। हुन त नेपाल रौतहटबाट समेत चुनाव हारे। तर उनलाई हराउनेको त्यति चर्चा भएन। तर काठमाडौको क्षेत्र नं २ बाट नेपाललाई दुईहजार भन्दा बढि मतान्तरले हराए पछि उनको चर्चा चुलियो। काठमाडौका सचेत मतदात भएको ठाँंउमा त्यो पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा चिनिएका नेता नेपाललाई हराए पछि सुवेदी चर्चामा आए।
पहिलो संविधान सभा संविधान नबनाई बिघटन भएपछि चर्चामा आएका सुवेदीको पनि बिस्तारै ओझेल पर्न थाले। उनी राजनीतिमा भएपनि पहिला जसरी चर्चामा रहेनन् ।
मंगलबार संविधानसभाको निर्वाचनमा आफुले हराएका नेता नेपालसंग एउर्ट मंचमा देखिए सुवेदी। त्यो पनि एकदम प्रशन्न मुद्रामा ।कार्यक्रमका बिशेष अतिथि थिए एमाले नेता माधवकुमार नेपाल । उनी नेपालबाट क्रमश : तेस्रो बाँया कुर्सीमा थिए। तर अहिले संयोग पनि गजवको नै परेको छ। सुवेदीले पहिलो संविधानसभामा हराएका नेपाललाई यस पटकको निर्वाचनमा भने सघाउनु पर्ने भएको छ । किन कि काठमाडौ क्षेत्र नं २ बाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभका साझा उम्मेदवार भएका छन् नेपाल।
मंगलबार एमाले र माओवादी केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको उम्मेदवारको परिचयत्मक कार्यक्रममा हिजोका प्रतिस्पर्धी नेपाल र सुवेदी आजका सहयात्रीका रुपमा परिणत भएका थिए। कार्यक्रममा नेपालले क्षेत्र नं २ को कुरा गर्दा सुवेदी पनि बडो चासोका साथ मुन्टो हल्लाउथे र हास्थे । नेपालले कार्यक्रममा भने ‘भृकुटीको बिहो पनि काठमाडौका क्षेत्र नं २ को बज्रयोगिनी मन्दिरमा भएको हो, उनलाई त्यहिबाट डोलमा हालेर तिब्बत लगेको हो। ’ यो कुरा सुन्न साथ सुवेदीले हाँस्र्दै मुन्टो हल्लाए । सुवेदी भने यसपटक काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ बाट वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका साझा उम्मेदवार भएका छन् ।
1533 पटक पढिएको